IiAkhawunti zePamm eziPhezulu eziPhezulu zeNtengiso ye-Forex 2021
Ukuba ujonge kwiiakhawunti ezilawulwayo ze-forex, ke amathuba okuba ufumene igama elithi 'ii-akhawunti zePAMM ezilawulwayo'. Ungakhankanyi i-LAMM kunye ne-MAM (ngakumbi emva koko).
I-PAMM yindlela yokwenza ukuba abatyali-mali bathengise ngokungacacanga, beshiya umsebenzi onzima wokuthenga nokuthengisa kumrhwebi onamava we-forex. Ukuphela kwento ekufuneka uyenzile kukuhlawulela inkonzo, edla ngokuba sisakhiwo sekhomishini esele kuvunyelwene ngayo.
Ewe kunjalo, enye yeenzuzo zolu hlobo lweakhawunti kukuba awuyi kudinga ukuxhobisa amazinyo ngolwazi kuhlalutyo lobuchwephesha. Kwangokunjalo, awudingi ukuqonda imbali yexabiso okanye iintsingiselo.
Umbono wokunikezela iinzame zokurhweba kwiqela lesithathu ayisiyonto intsha. Nangona kunjalo, kwezi ntsuku abathengisi ngakumbi nangakumbi bayazisebenzisa online Imijelo yotyalo-mali enje ngeeakhawunti ezilawulwayo nezenzekelayo.
Kunqabile ukuba iiasethi zemali ezinje ngekamva, isitokhwe, izinto zorhwebo, iibhondi kunye nezinto onokukhetha kuzo ziya kuthengiswa ngeakhawunti yePAMM. Nangona kunjalo, kukho ukungafani kulo mthetho. Ukuba unomdla kurhwebo lwe-forex ngeakhawunti elawulwayo okanye inkqubo ezenzekelayo- iakhawunti yePAMM inokuba yile nto ubuyikhangela.
Nabaphi na abatyali mali be-newbie- okanye abantu abathe baphuma kumdlalo okwethutyana, esi sikhokelo siza kucacisa ukuba yintoni iakhawunti yePAMM kwaye ujonge ntoni ngaphambi kokukhetha umboneleli. Emva koko siya kuzisa ezona akhawunti zePAMM zilawulwa kakuhle ze-2021.
Yintoni iAkhawunti yePAMM elawulwayo?
I-PAMM sisigama esithi 'uMlawuli woLawulo loLwabiwo lweepesenti'. Ngamafutshane, le yiakhawunti elawulwayo yorhwebo ekwenza ukuba ukwazi ukutyala imali yakho kumrhwebi onolwazi. Aba batyalomali banembali ende ebaleni kwaye iziphumo ezinzulu zokurhweba ziyafumaneka ukuze kuqinisekiswe.
Olu hlobo lweakhawunti lusebenza ngendlela efanayo kwingxowa mali. Isizathu sokuba, ngokuyintloko utyala imali yakho kunye nomntu wesithathu ukuthengisela wena. Ngapha koko, njenge ngxowa mali, imali yakho ibanjiwe kunye nabanye abatyali mali ukwenza 'imbiza'.
Ukurhweba ngale ndlela kwenza ukuba ufumane unyawo lwakho emnyango weemarike zezemali zehlabathi. Konke ngaphandle kokufumana nabuphi na ubuchwephesha xa kufikwa kurhwebo. Ikwavumela ukuba urhwebe ngezinga elikhulu kunokuba ubunakho. njengemveliso, unokunyusa inzuzo yakho enokubakho kwinqanaba elikhulu.
Xa kuthethwa oko, i-PAMM kunye neengxowa-mali ezifanayo ziyahluka kwezinye iindlela. Ngeakhawunti ye-PAMM, iimali zakho ziya kunikwa umrhwebi omnye onembali yokusebenza esebenzayo. Oku kuchasene nengxowa-mali efanayo, apho iziko elikhulu lezemali liya kuthenga kwaye lithengise egameni lakho.
Umrhwebi weakhawunti yePAMM uhlala egxila kuyo urhwebo usuku, ngokuchasene nokuthenga iiasethi kunye nokuzibamba kangangeenyanga ngexesha. Ukongeza kulo mahluko uphambili, abathengisi beakhawunti ye-PAMM baya kutyala imali yabo kwipotfoliyo. Lo ngumcimbi oqinisekileyo kolu hlobo lweakhawunti kuba yeyona nto ibalulekileyo kumrhwebi wePAMM ukurhweba ngesicwangciso sobungozi obuncinci.
Aba bathengisi benza imali ngekhomishini kuyo yonke inzuzo abayenzileyo. Iintlawulo zekhomishini ziya kuthathwa ngaphambi kokuba wena okanye abanye abatyali mali bafumane inzuzo yabo.
Kula macandelo angezantsi, sidibanise inkcazo emfutshane yokusebenzisana abathathu ababandakanyekayo kwinkqubo yesiqhelo yeakhawunti.
Utyalomali lwe Forex
Njengoko ngokungathandabuzekiyo uqikelele, umtyali mali ngumntu otofa imali kwiakhawunti yePAMM. Ukuba ungumtyali mali, eyona njongo yakho iphambili kukwenza iingeniso zemali ngokungakhathali, ngaphandle kokwenza okuninzi. Eli 'phuli' linokubandakanya wena kunye nabanye abatyali mali abali-100.
Olu hlobo lweakhawunti lunokufaneleke ngakumbi kuwe ukuba awunamava xa kufikwa kwiimarike ze-forex, okanye ukuba uyazi ukuba wenza ntoni kodwa uswele iiyure zokulungisa ngosuku.
Umrhwebi we-Forex wePAMM owaziwayo
Ngaphambi kokuba wenze uninzi lweeakhawunti ze-PAMM, kuya kufuneka ubeke imali kumrhwebi owaziyo. Oku kuya kuba ngumphathi wengxowa-mali yakho. Uyakuthembela kumrhwebi osele ukhankanyiwe malunga neengxowa-mali zakho zotyalo-mali kwaye ngethemba lokuba baya kwenza inzuzo egameni lakho kwimarike ye-forex.
Unokuzibuza ukuba umrhwebi onamava uzuza njani kolu seto? Kuwo wonke urhwebo olwenziwe kwiakhawunti yePAMM, umrhwebi uya kukuhlawulisa kunye nabanye abatyali mali ngepesenti yekhomishini. Yile ndlela umrhwebi enza ngayo imali. Ezi akhawunti zihlala ziza nekhontrakthi yokwabelana ngenzuzo. Ngenxa yoko, umrhwebi kufuneka enze inzuzo enkulu njengoko inkunzi inyuka.
Xa umthengisi we-forex onamava eqokelele imali kubo bonke abatyali-mali ababandakanyekayo, kuya kufuneka baye kwinkampani yabarhwebi. Umzi mveliso wokurhweba kufuneka wenze ukuba abathengisi babonelele ngeenkonzo zePAMM.
Xa uthembele kumntu wesithathu ukuba anakekele imali yakho, kubalulekile ukuba iindawo ezithile zokhuseleko zibekwe kwindawo ezinje ngesivumelwano 'seGunya eliMiselweyo leGqwetha'.
Ngamafutshane, esi sisivumelwano esinika umrhwebi imvume yokuthengisa egameni lakho (kwindawo ethile yomrhwebi). Ngenxa yoko, oku kuthetha ukuthatha uxanduva olupheleleyo ngayo nayiphi na ilahleko enokudibana nomrhwebi xa ekuthengela okanye ekuthengisela.
Isebenza njani iakhawunti yePAMM?
Ngaphambi kokuba singene kwisakhelo seakhawunti yePAMM, masijonge ukuba isebenza njani inkqubo yotyalo-mali. Iiakhawunti ezilawulwayo zePAMM zifana nepotifoliyo efikelela kude, uninzi lwabatyali zimali lubambe inxenye yotyalo-mali kunye nokwabelana nomphathi weakhawunti ye-PAMM (umrhwebi).
Masicinge ukuba utyale imali eyi-20,000 kwi-akhawunti yakho ye-PAMM ye-forex
Ngoku masithi omnye umtyali mali utofa i $ 20,000 ngokunjalo
Emva koko, umrhwebi weakhawunti yePAMM utyale imali eyi- $ 60,000 epokothweni yakhe.
Njengoko ubona kumzekelo wethu ongentla, le potifoliyo yePAMM yenziwe yi- $ 100,000 kwiimali zokuthengisa. Une-20%, omnye umtyali-mali ungumnini nge-20% kwaye umrhwebi wePAMM ungumnini we-60%. Ngenxa yolu lwakhiwo, uya kuhlala une-20% yemali eseleyo yomthengisi.
Komnye umzekelo, masicinge ukuba kwinyanga yoku-1 yorhwebo, umphathi weakhawunti yakho wenza inzuzo engama-40%, Kwiakhawunti eyi- $ 100,000 esetyenziswe apha ngasentla, oku kuthetha ukuba inzuzo ngama- $ 40,000.
Umphathi weakhawunti ye-PAMM uhlawulise ikhomishini ye-15%, ke yenze i-6,000 yeedola. Imali eseleyo engama- $ 34,000 iza kwabiwa phakathi kwabachaphazelekayo.
Ukuphela kwenyanga yokuqala, ixabiso leakhawunti ye-PAMM lime kwi- $ 134,000
Oku kuthetha ukuba iipesenti ezingama-20 kwiakhawunti zilingana ne- $ 26,800
Kukwanjalo nakomnye umtyali mali - nanjengoko benesabelo se-20%
Umrhwebi weakhawunti yePAMM une-60% yesitokhwe, ngoku exabisa i-80,400 yeedola
Ngokusisiseko, ngokuvumela umrhwebi onamaxesha ukuba athenge kwaye athengise i-forex kuwe, ukwazile ukwandisa utyalomali lwakho ukusuka kwi- $ 20,000 ukuya kwi- $ 26,800- konke ngaphandle kokwenza into.
Iinkqubo zeAkhawunti yePAMM
Xa kuziwa kwiinkqubo ze-akhawunti ye-PAMM, into yokuqala ethi qatha engqondweni sisivumelwano esineMida seGqwetha. Uya kudinga ukusayina enye yezi ukuqinisekisa isivumelwano sakho sokuvumela umrhwebi onamava ukuba arhwebe egameni lakho.
Oku kuthetha ukuba akukho ziphumo zisemthethweni ukuba umrhwebi unelishwa ngokwaneleyo ukuba enze ilahleko. Umrhwebi onelayisensi nolawulwayo uya kujonga ibhalansi yeakhawunti yakho kwaye abeke iliso kulo naliphi na urhwebo olubekiweyo.
Ukulawulwa kweeAkhawunti zePAMM Ukuphela kwenyanga
Makhe sijonge umzekelo wendlela onokuthi uvavanye ngayo ukusebenza kweakhawunti yakho ye-PAMM ephelileyo ekupheleni kwenyanga nganye.
Masithi umrhwebi wePAMM ujongana nezibini zemali kuyo yonke inyanga kaJulayi
Khawufane ucinge ukuba umrhwebi unenyanga enenzuzo, esenza iipesenti ezingama-40%
Kwiakhawunti ye-PAMM ekuqaleni enexabiso elingange- $ 200,000, oku kuthetha ukuba ngoku ixabise i $ 280,000.
Kwiphepha, oku kuthetha ukuba utyalomali lwakho lokuqala lwe- $ 20,000 lukhule nge-40%
Nangona kunjalo, njengoko besesitshilo, umrhwebi wePAMM kufuneka avuzwe ngokwenza iinzame ngokwenza inzuzo. Kananjalo, baya kuthatha ikhomishini yabo kuyo nayiphi na inzuzo phambi kwakho okanye nabaphi na abanye abathathi-nxaxheba babone nayiphi na imbuyekezo.
Umrhwebi wenza iipesenti ezingama-40 ngoJulayi elingana nenzuzo eyi- $ 80,000
Ngokunciphisa i-15% yekhomishini, umrhwebi uya kwenza i-12,000 eyongezelelweyo
Emva kokuthatha ikhomishini esebenzayo kukho i-68,000 yeedola eseleyo yokwabelana phakathi kwabo bonke abatyali mali be-akhawunti yePAMM
Kuthekani ukuba uMrhwebi wePAMM uneNyanga yokulahleka?
Ekurhwebeni, akukho siqinisekiso sokuba umrhwebi wePAMM uya kuba nenyanga enenzuzo. Ke masicinge ukuba umrhwebi ebe neziphumo ezibi.
Ngo-Agasti urhwebo lwenza ilahleko engama-20%
Masicinge ukuba akukho namnye kubatyali mali owarhoxa kwisibonelelo sakhe ngoJulayi, oko kuthetha ukuba iphothifoliyo ye-PAMM ilahlekile ngama-20% eedola ezingama-280,000
Ngokulahleka kwe- $ 56,000, ibhalansi yeakhawunti ihlala kwi-224,000 yeedola
Ngaphandle kotyalomali lwakho kwiakhawunti ekubeni yinzuzo (kuba ingaphezulu kwe- $ 200,000 yokuqala), umrhwebi akazukuhlawulisa nayiphi na ikhomishini ngo-Agasti.
Njengobunjani bokuthengisa kuyo nayiphi na imakethi, kuhlala kukho ithuba lokuba umphathi weakhawunti ye-PAMM abe namava enyanga embi.
Ngapha koko, kuya kufuneka uphephe ukurhoxisa imali kwiakhawunti, eya kuthi isebenze ngokufanelekileyo ngenyanga yelahleko. Isizathu kukuba ixabiso leakhawunti yakho liza kutshintsha. Kukwasebenza kwanjalo xa utyala imali kwiimali ezihlangeneyo, njengoko ingeyiyo inyanga nenyanga eya kuba yinzuzo.
Ipesenti yokuTsalwa kweAkhawunti yePAMM
Ipesenti yokutsala iakhawunti yePAMM yinto ebalulekileyo xa ukhetha umboneleli. Ukuhla kweyona pesenti iphezulu kwiilahleko abathe bazifumana abathengisi bePAMM, ngokunxulumene nexabiso eliphezulu leakhawunti yomrhwebi.
Umzekelo, masicinge ukuba iakhawunti ye-PAMM ixabisa i $ 100,000 ukuphela kwenyanga yokuqala
Ekupheleni kwenyanga yesi-2, iakhawunti ixabisa i-120,000 yeedola
Ixabiso eliphambili leakhawunti ye-PAMM yi- $ 120,000 kuba yeyona nto ibaluleke kakhulu ukuza kuthi ga ngoku
Ukuba umzekelo, inyanga yesithathu iphela ngaphezulu kwe-90,000 yeedola, ungabala le mali ngokunxulumene ne-120,000 yeedola
Owona kutsalwa uphezulu kule akhawunti yokuzekelisa ngoku ingama-25%
Ukubeka ngokulula, ukuba kwinyanga yesibini utyalomali kwi-akhawunti ye-PAMM, ixabiso lakho lotyalo-mali liya kuba ngama-25% ezantsi ngenyanga yesithathu.
Eyona nto unokuyenza kukujonga ii-akhawunti ze-PAMM ezilawulwayo ngepesenti esezantsi yokuhla, ngokufanelekileyo ngaphezulu kwenyanga elishumi elinambini.
Wenza ntoni uMthengisi?
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, umthengisi we-forex uyafuneka ukuze athengise kwaye athengise iiodolo zomthengisi wakho wePAMM okhethiweyo. Umrhwebi ekubhekiswa kuwo ufuna ukuhlawulwa ngeenkonzo zawo. Ngenxa yoku, umrhwebi kufuneka ahlawule iindidi zeekhomishini kunye nemirhumo.
Ukukhanya kwinto yokuba ungumntu ochaphazelekayo, ezi ndleko zongezelelweyo kufuneka zifakwe kwiikhomishini zomrhwebi. Oko kukuthi, ayisiyomnyama namhlophe njengokutyala imali nje ngomrhwebi we-forex owaziyo kwaye ushiye umrhwebi ukuba akhethe nawuphi na umrhwebi abamfunayo.
Kwelinye icala, kufuneka kubekho amanyathelo okhuseleko ukuze uqiniseke ukuba ungangqinisisa naluphi na utyalomali olwenzelwe umphathi wePAMM. Kukwakho nesiqinisekiso sokuba imali yakho ibekelwe bucala kumrhwebi. Ngamanye amagama, awuyi kuzikhathaza malunga nomrhwebi wePAMM ohambisa imali yakho kwiakhawunti yakhe.
IiAkhawunti eziPhathiweyo zePAMM
Lilonke, zimbini iindlela zokusebenzisa ii-akhawunti ze-PAMM-ngokuthe ngqo okanye ngomnikezeli weakhawunti yeqela lesithathu. Makhe sihlolisise ukhetho ngalunye ngokweenkcukacha.
Akhawunti yoMthengisi ngqo
Kukho iitoni zabarhwebi be forex abanelayisensi kwindawo yokubonelela ngeakhawunti yePAMM. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukubhalisela iakhawunti yorhwebo ngokusayina kunye nokwenza idiphozithi.
Okulandelayo, kuya kufuneka ujonge ukwahlulwa kweakhawunti ye-PAMM yeqonga lomthengisi. Apha uya kufumana uluhlu olubanzi lomrhwebi ngamnye wePAMM okhoyo.
Ngokubalulekileyo, kufuneka uchithe ixesha lokuvavanya iziphumo zomrhwebi ekubhekiswa kuye. Ukongeza koku, kuya kufuneka ujonge ukuba zeziphi iiasethi abazithengisayo.
Emva kokufumana umrhwebi wePAMM, uhlala uvumelana ngesakhelo sekhomishini. Okwangoku, kuya kufuneka ugqithisele imali kumrhwebi weakhawunti ye-PAMM ukuze bakwazi ukuthengisa egameni lakho.
Enye yeenzuzo eziphambili zokurhweba ngokuthe ngqo kunye nomrhwebi kukufikelela kwiindawo zokurhweba eziqhuba kakuhle. Kubalulekile ukuba naliphi na iqonga olikhethayo linelayisensi kwi FCA (IGunya lokuZiphatha kwezeMali), okanye iqumrhu elifanelekileyo lendawo yakho. Amanye amaqumrhu olawulo aziwayo yiCySEC (iZokhuseleko zaseCyprus kunye neKhomishini yoTshintshiselwano) kunye ASIC (Ikhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTyalo mali).
IiAkhawunti zaMntu wesithathu
Ngoku kubanikezeli beakhawunti yomntu wesithathu kwii-PAMM. Ukubeka ngokulula, umboneleli ngumntu ophakathi phakathi kwakho kunye nefemu yomrhwebi.
Kwigama lokuthelekisa, siza kuchaza ngokufutshane indlela umntu osebenza ngayo nge-akhawunti yePAMM.
Iiakhawunti zeqela lesithathu le-PAMM zibonelela ngokuguquguquka okuncinci kodwa zilungile ukuba ufuna umvuzo ongahambiyo kurhwebo lwe-forex, oluzenzekelayo ngokupheleleyo.
Xa uxhasa ngezimali iakhawunti yakho ngomntu wesithathu, ngekhe kubekhona nayiphi na ifowuni yokuba ukhethe umrhwebi wakho wePAMM. Kule meko, awuyi kucelwa ukuba uxoxisane nomrhumo wekhomishini. Iqonga lomntu wesithathu kule meko lihlala linyamekela yonke into.
Inketho yeakhawunti yeqela lesithathu ikwenza ukuba usebenzise abathengisi abazimeleyo. Aba barhwebi bahlala bengasebenzisi iPAMM eqhelekileyo okanye abarhwebi.
Ukuphinda, qiniseka ukuba nawuphi na umboneleli wePAMM, umntu wesithathu okanye hayi, usebenzisa inkampani enelayisensi yokuthengisa. Ukuba umrhwebi akalawulwa, ngokuyintloko ubeka imali yakho kunye nolwazi lobuqu emngciphekweni.
Ezinye iiNkqubo zeMali ezilawulwayo
Xa usenza uphando ngee-akhawunti ze-PAMM ezilawulwayo, usenokuba ubonile ii-LAMM kunye nee-MAMs. Nangona zivakala ngokufanayo, kukho umahluko obonakalayo phakathi kwazo.
Sibeke ndawonye inkcazo emfutshane yeenkqubo nganye zorhwebo ezilawulwa kwangaphambili ukuqaqambisa umahluko. Njengamaxesha onke, uphando lubalulekile ngaphambi kokuzibophelela kulo naluphi na uhlobo lweakhawunti.
Njengoko usazi ngoku i-PAMM imele 'iModyuli yoLawulo loLwabiwo lweepesenti'. Ukuba ukhetha njalo, unokwabela isixa semali kwi-PAMM, oko kuthetha ukuba usenakho ukukopa ukuthengisa kwezemali kwiakhawunti yakho ephambili.
Ukulawulwa kweeakhawunti ze-PAMM kuvumela abathengisi ukuba basebenzise ngaphezulu kweakhawunti enye. Oku kuthetha ukuba unokwabela ipesenti eyahlukileyo yenkunzi yakho kuyo yonke inkqubo yorhwebo. Ewe kunjalo, oku kunokutshintsha iphothifoliyo yakho.
Ubume bezorhwebo kwiiakhawunti ze-PAMM zithathwa njengezinomtsalane kubaphathi bemali, oko kukuthi ngenxa yeendlela ezahlukeneyo ezikhoyo. Abatyalomali bayakwazi ukukhetha kwangaphambili ixesha lokurhweba, ixesha lokudlulisa kunye nokuvumelana ngexabiso lekhomishini. Ungajonga ukurhweba kwakho kwePAMM ngoku.
I-LAMM imele 'iModyuli yoLwabiwo lweLot' kwaye iphambi kwePAMM. Ngokungafaniyo ne-PAMMs, ii-LAMMs azisebenzi ngokusekwe kubungakanani beakhawunti yomtyali mali ngamnye.
Ngalo lonke ixesha umrhwebi we-LAMM ethenga ixabiso lemali esemgangathweni, iakhawunti yomtyali mali nganye inyuka ngexabiso ngokwenqanaba eliqhelekileyo. Ukuba urhweba ngenani elingaphezulu kwe-avareji yeemali ezinkulu ke ii-LAMM zinokuba nkulu.
Ngale nto ithethwayo, ukuba unemali eyorhwebo engaphezulu kweyomphathi we-LAMM, ayisiyonto ilunge kangako. Kungenzeka ukuba umrhwebi we-LAMM onamava kwaye nawe unepotifoliyo yesayizi efanayo, kwimeko apho, inkqubo isebenza ngcono kakhulu.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho enye inketho yeakhawunti ye-forex elawulwayo yi-MAM, emele 'uMphathi weAkhawunti ezininzi'. Kuyinyani kwigama layo, i-MAM yenza ukuba abathengisi bakwazi ukulawula iiakhawunti ezininzi zokurhweba kwiqonga elinye.
Iakhawunti ye-MAM, ngakumbi, ithathwa njengeyona ifanelekileyo kubarhwebi abanokunyamezela umngcipheko omkhulu. Isizathu soku kukuba abaphathi be-MAM banokufaka isicelo sokuphakama okuphezulu kwii-akhawunti ezichaziweyo, ezahluliweyo.
Uyikhetha njani iAkhawunti efanelekileyo yePAMM
Ukususela ekuqaleni ukuya esiphelweni, enye yezona zinto zinzima kurhwebo ngeakhawunti ye-PAMM kukukhetha umrhwebi olungileyo othembekileyo womsebenzi.
Oku kubalulekile kuba umphathi wePAMM uya kuba noxanduva lokwenza izigqibo ezibalulekileyo egameni lakho. Ngale nto ithethwayo, ukuvumela umntu okanye urhwebo lwe-algorithmic Inkqubo yokusebenzisa imali yakho ukuthenga nokuthengisa ixhaphakile kuluntu lwezorhwebo.
Kwangokunjalo, kubalulekile ukuba kuqinisekiswe ukuba umrhwebi wePAMM ekuthethwa ngaye unamava, ukongeza kwiziphumo eziqinisekileyo zokurhweba kwiimarike zezemali.
Ukukunceda ufikelele kule njongo, sidibanise uluhlu lwezinto ekufuneka siqwalasele kwimfuno yakho yokufumana umphathi we-akhawunti yePAMM efanelekileyo nina.
Uninzi lwamaqonga e-akhawunti yePAMM luya kufuna idiphozithi encinci ukuze uqalise. Ngamanye amagama, imali oyityalayo kwimbiza yorhwebo yomphathi wePAMM.
Amanye amaqonga e-PAMM achaza ubuncinci kutyalo-mali lweedola ezimbini okanye amakhulu amathathu, ngelixa ngamanye amaxesha oku kunokuba ngaphezulu kakhulu kunoko. Nokuba ithini na eyona dipozithi isezantsi, kuya kufuneka uhlala utyala imali eninzi njengoko unokukwazi ukuyilahla.
Enye yeemetrikhi eziphambili xa ujonga iiakhawunti ezilawulwayo zePAMM kukwahluka. Sebenzisa ngaphezulu komrhwebi omnye kwangoko kuphucula ukwahluka kwepotifoliyo yakho.
Masithi uthatha isigqibo sokutyala imali eyi-20,000 yeedola. Endaweni yokutyala imali nje Nye Umrhwebi wePAMM, unokutyala imali ezintlanu. Oku kuthetha ukuba ukuba umrhwebi omnye unenyanga yelahleko, iphothifoliyo yakho ayizukufumana ziphumo.
Iiklasi zeAsethi ezininzi
Iiakhawunti ezilawulwayo zePAMM zibonelela malunga nayo yonke iasethi phantsi kwelanga. Nokuba kunjalo igolide, iimali, isitokhwe esibhakabhaka okanye amandla - kuyakubakho umrhwebi ophumeleleyo olungele iimfuno zakho.
Xa sele uyitshilo loo nto, kunokuba kuhle ukuba uthathele ingqalelo ukwahlula ipotifoliyo yakho, ngokuthengisa ngaphezulu kweasethi enye, kunye nabarhwebi bePAMM. Emva kwayo yonke loo nto, kuncinci umngcipheko obandakanyekayo xa usasaza imali yakho phakathi kweeklasi ezininzi.
Njengaye nawuphi na umtyali mali onamava, abathengisi beakhawunti ye-PAMM bajonge ukwenza imali. Njengoko besithethile ngaphambili, umrhwebi wePAMM uza kwenza imali ngekhontrakthi yekhomishini. Ukhumbula ukuba umphathi weakhawunti uya kwenza imali kuphela xa usenza inzuzo, yeyona nto banomdla kuyo ukuze benze ngokusemandleni abo.
Ikhomishini ixhomekeke kakhulu kumrhwebi wePAMM kodwa kufuneka ibonakalise iziphumo zomntu, ubungcali kunye namava. Ukubeka ngokulula, kungcono kakhulu ukuhlawula iipesenti ezili-18 zekhomishini kumrhwebi ophumeleleyo ke kukuhlawula ixabiso eliphantsi kwaye ungaze ubone naziphi na izibonelelo.
Ngaphambi kokuthatha isigqibo kumboneleli we-PAMM ofanelekileyo, kubaluleke kakhulu ukuba ubenolwazi malunga nendlela esebenza ngayo isakhelo sekhomishini.
Ingxelo egciniweyo yokuKhangela
Konke kulungile kwaye kulungile ukufumana umrhwebi wePAMM obanga ukuba uzuza kangange-80% ngenyanga, kodwa ngaphandle kokuba eli bango liqinisekisiwe ngeziphumo emva koko unyathele ngononophelo. Ngapha koko, kuyacetyiswa ukuba kuthintelwe abo baboneleli abathile.
Uhlobo lolwazi ekufanele ukuba ulukhangele kukuba zeziphi na iiklasi zeasethi ezithengwa ngumthengisi wePAMM kwaye azithengise kwaye okona kubalulekileyo- yeyiphi imbuyekezo yenyanga ebonisa. Xa usenza umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya, kuya kufuneka usoloko ujonga ukuba yeyiphi ipesenti yokuncipha. Okungakumbi ngalo mbandela kamva.
Iqonga elilawulwayo loRhwebo
Ukukhetha iqonga elilawulwayo lomrhwebi kubaluleke kakhulu. Umzekelo, i-UK Brokers inyanzelekile ngokusemthethweni ukuba ifumane iphepha-mvume kwi-FCA (iGunya lokuZiphatha kwezeMali). Amanye amaqumrhu alawulayo alandelayo abandakanya i-ASIC (iKhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTyalo-mali) kunye neCySEC (iCommerce Securities and Exchange Commission)
Ngokubeka kuphela imali yakho kubarhwebi abanelayisensi, unokuqiniseka ukuba ulwazi lwakho kunye nemali yakho ikhuselwe. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa abatyali mali baqinisekisiwe ukukhuselwa kwengxowa mali. Oku kuthetha ukuba imali yakho iya kwahlulwa kuleyo yenkampani yomrhwebi. Imali oyisebenzele nzima ayinakuthathwa njengetyala ukuba inkampani iyangena, kwaye ayinakudluliselwa kwiakhawunti yomphathi weakhawunti yePAMM.
Kubarhwebi abahlala berhoxa kwiakhawunti yorhwebo, ii-PAMM ezilawulwayo aziyi kuba luncedo. Endaweni yoko, iakhawunti yePAMM kufuneka ijongwe njengesicwangciso-mali sexesha elide.
Ewe kunokubakho ixesha ebomini bakho xa ufuna ukufikelela kwingxowa mali yakho yePAMM. Kungenxa yesi sizathu le nto kubalulekile ukuba ube nokuqonda okungqinelanayo komgaqo-nkqubo wokukhulula umboneleli wePAMM.
Umzekelo, ezinye zifuna ixesha lokuhlawulelwa kwiinyanga ezi-6 kwidiphozithi yakho, oko kuthetha ukuba ngekhe ukwazi ukurhoxisa imali yakho ngelo xesha.
Xa kuziwa kukhetho lokuhlawula, indawo nganye iya kwahluka. Nokuba yeyiphi indlela, ukuze uqalise ukutyala imali ngolu hlobo lweakhawunti kufuneka ubeke imali ethile. Uninzi lwamaqonga lwenza ukuba kwenziwe iintlobo zokuhlawula eziqhelekileyo ezinje nge-debit / amakhadi etyala kunye nokudluliselwa kwebhanki.
Abanye ababoneleli bePAMM banikezela ngeendlela ezinje nge-e-wallets kunye ne-cryptocurrensets. Soloko ujonga imigaqo kunye neemeko kunye netafile yemirhumo ngaphambi kokuzibophelela nakumboneleli omnye.
IiAkhawunti eziPhambili zePAMM zeAustralia 2021
Okwangoku, siye sahamba kuyo yonke into oyifunayo malunga neeakhawunti ze-PAMM ezilawulwayo ze-forex. Ngenxa yoko, unomdla wokuqalisa.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufumana umboneleli weakhawunti yePAMM owaziwayo. Kukho amakhulu ababoneleli ngaphandle apho banokukhetha khona, ke kunokuba nzima ukucoca okuhle kokubi.
Xa kuziwa kwiiakhawunti ze-PAMM ezilawulwayo ze-forex, ukugcina ixesha elininzi kunye nomzamo sidibanise uluhlu lwababoneleli ababalaseleyo
1. Iimakethi zeHlabathi-iiNkonzo zokuPhela eziPhela ze-Pamm ngeQonga elinye
Iimakethi zehlabathi zininzi ekunokubonelela ngazo xa kuziwa kwiakhawunti yokuthengisa. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kwiakhawunti ye-PAMM ukuya kwiinkqubo ze-AI. Eli qonga linxibelelene ngqo ne-HYCM (indawo yomrhwebi emiselweyo). Ngenxa yoko, uya kuba nokufikelela kumawaka ezixhobo zemali kwiimarike.
Eli qonga lokutyala imali libonelela ngenkonzo yeakhawunti yokugqibela ye-PAMM. Iimakethi zeHlabathi zibonelela ngeendlela ezi-3 ezahlukeneyo zeakhawunti. Inketho yokuqala yi 'Akhawunti yeTyala', ekuvumela ukuba uthathe ithuba lenkonzo yePAMM yesiza. Nceda uqaphele, nangona kunjalo, ukuba idipozithi encinci efunekayo ukusebenzisa le akhawunti yi- € 2,500.
Ukuqhubela phambili kwi-'Akhawunti eseMgangathweni ', eyona dipozithi encinci yale yi- € 5,000, eza ne-20% yesivumelwano sokwabelana ngekhomishini. Oku kuthetha ukuba ukuba umrhwebi wePAMM wenza ingeniso ye- $ 1,000 kwinyanga yokuqala, kwiNtengiso yeHlabathi igcina i- € 200. Kule meko, ushiye i-800 yengeniso kurhwebo.
Nangona umrhumo unokubonakala ulixabiso elincinci, kuya kufuneka ujonge isabelo senzuzo ngokusekwe kwiziphumo zokugqibela. Ngaphandle kwentlawulo yekhomishini, uya kucelwa ukuba uhlawule umrhumo wonyaka wesondlo we-1%.
Umboneleli we-PAMM akongezi ixabiso lokusasazeka ekusasazeni. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uya kuba nakho ukuthatha imali kwiakhawunti yakho ye-PAMM ekupheleni kwenyanga. Iqonga alibizi nantoni na eyongezelelweyo ngokufaka okanye ukukhupha imali- ngaphandle kokuba wenze njalo ngekhadi letyala.
Okulandelayo, kwiakhawunti yesithathu kunye neyokugqibela ekunikezelweni - 'iAkhawunti yeNkulumbuso yeGolide'. Xa kufikwa kule akhawunti, iiMarket zeHlabathi zibiza kuphela i-10% yekhomishini yokusebenza. Ukongeza, akukho ndleko zolondolozo minyaka le zokuhlawula.
Njengoko unokulindela ngeakhawunti enexabiso eliphezulu, kukho izibonelelo ezongezelelweyo. Umzekelo, iAkhawunti yeNkulumbuso yeGolide ibonelela ngokufikelela ngokupheleleyo kwibhokisi yedipozithi yokhuseleko (simahla), inkxaso kubathengi ngeempelaveki kunye neebhonasi ezahlukeneyo. Into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele yidipozithi encinci eyi- $ 25,000. Ukuba awunalo olo hlobo lokulinganisa kwiakhawunti yakho, awuyi kulungela olu khetho lweakhawunti.
I-akhawunti yesilingo yasimahla yeentsuku ezingama-30- ine- € 2,500 yedipozithi encinci
Iimakethi zeHlabathi zicacile malunga nolwabiwo lwenzuzo phakathi kwe-10% kunye ne-20%
Akukho kuphawulwa kwiipip okanye ukusasazeka
€ 5,000 idiphozithi encinci kwiakhawunti esemgangathweni
Ndwendwela iiMakethi zeHlabathi ngoku
I-76.4% yeeakhawunti zabatyali zimali baphulukana nemali xa bethengisa iiCFD
2. I-FX Pig - Middleman Phakathi kwakho kunye nabaRhwebi abazimeleyo be Forex
Ingulube yeFX ngumboneleli ngenkonzo weakhawunti ye-PAMM. Eli qonga aliboneleli ngeenkonzo zeakhawunti kubatyali mali beJoe, kodwa likwajoyina imikhosi kunye neenzuzo ezininzi eziqinisekisiweyo ze-forex. Lo mboneleli usebenza njengomphakathi phakathi kwakho kunye nomrhwebi wePAMM. Amaqabane ama-4 awaziwa kakhulu yi-Onda, i-True Move, iFXTitan kunye neVola.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba unikele ixesha lakho ekuphandeni umrhwebi ngamnye wePAMM. Kubalulekile ukuba uchonge ukuba loluphi uhlobo lwesixhasi (ukuba sikhona) umrhwebi asisebenzisayo, zeziphi izinto zexabiso ezijongwa ngumrhwebi, kunye neziphumo zorhwebo eziqinisekisiweyo.
Xa ufikelela kwinqanaba apho uthathe isigqibo malunga nomrhwebi, iFX Pig iya kuyikhathalela inkqubo yeakhawunti yePAMM. Okokuqala, kuya kufuneka uxhase i-akhawunti yakho yePAMM ubuncinci be- $ 500. Izinketho zokuhlawula ezikhoyo kweli qonga kukudluliselwa kweengcingo zebhanki, ikhadi lebhanki letyala kunye ne-e-wallets ezinje ngeNeteller kunye neSkrill.
Abathengisi beakhawunti ye-Forex abanjengoFXTitan banobuncinci obubiza kakhulu, obuma kwi $ 2,000. Lo mrhwebi unemirhumo yokusebenza entle kakhulu ye-35% Konke kusathethwa, i-FXTitan, ngakumbi, ineziqinisekiso zokurhweba. Lo mrhwebi une-8.8% yokutsala, okunomtsalane.
Inika ukufikelela kubarhwebi be-forex abangenazinto
Ubuncinci bediphozithi $ 500
Ukuthengisa kwangaphambili kwe-akhawunti yePAMM
Iipesenti ezingama-35 zekhomishini yesabelo senzuzo
Ndwendwela iFig pig ngoku
3. I-Insta Forex- iAkhawunti yePAMM ngqo noMthengisi
I-Insta Forex ngumrhwebi ohambisa indawo yokurhweba ngeeasethi ezahlukeneyo njengokukhetha, isilivere, igolide, i-100 + yemali ngambini kunye nesitokhwe esiphantse sibe ngama-90 se-CFD.
Le nkampani i-online broker yahlukile kula maqonga akhankanywe apha ngasentla. Isizathu soku kukuba i-Insta Forex yinkampani yebroker egcweleyo endaweni yomphathi weakhawunti ozimeleyo wePAMM.
Kule meko, uya kucelwa ukuba ubhalise kunye nomthengisi ngokuthe ngqo kwaye ubeke imali yakho apho. Xa ukwenzile oko unokukhangela abathengisi beakhawunti yePAMM kwaye ukhethe enye ukuba 'uyikope'. Lo mboneleli wenza ukuba usasaze ikomkhulu lakho kuluhlu lwabarhwebi. Oku kuluncedo ukuba ufuna ukwahlula iphothifoliyo yakho.
Xa kuziwa kwimirhumo yekhomishini, oku kuya kuxhomekeka ikakhulu kuhlobo lweakhawunti onayo kunye neeasethi ezithile umrhwebi ekubhekiswa kuye agxile kuzo. I-Insta Forex, njengaye nawuphi na umrhwebi esincomayo, inelayisensi epheleleyo kwaye ilawulwa yimizimba efanelekileyo. Kule meko, yiyo i-FSC (BVI). Iindlela zokuhlawula ezithandwayo ziyafumaneka kweli qonga, kubandakanya amakhadi etyala / okuthenga, ukuhanjiswa kwebhanki kunye ne-e-wallets.
Ukudibana okokuqala ngesandla nomrhwebi owaziwayo
Ukhuphiswano oluncinci lokugcina kunye neakhawunti esemgangathweni
Ilayisenisi yi-FSC kunye neCySEC
Akucacanga kulwakhiwo lwekhomishini yeakhawunti yePAMM
Ndwendwela i-Insta Forex ngoku
4. IAlpari -Izivumelwano zeAkhawunti yePAMM eguqukayo
Inkampani ye-brokerage ekwi-Intanethi ibonelela abathengisi ukufikelela ngokuthe ngqo kwiiakhawunti zePAMM ezilawulwayo. Ngokufanayo kwi-Insta Forex, uyakwazi ukukhetha abathengisi ngokwakho. Ukufumana abathengisi ababalaseleyo kuya kufuneka ukuba baphande ukhetho lwabo lokuthengisa kunye nerekhodi yomkhondo.
Uninzi lwabarhwebi be-PAMM kweli qonga banamava alishumi elinamava, okubeka kwindawo efanelekileyo yokuphumelela. Xa ufumene umrhwebi ofuna ukutyala imali kuye, ungaqala inkqubo yoku-ayina amaxabiso ekhomishini kunye neendlela zokurhweba.
Umlawuli weakhawunti nganye wePAMM kufuneka axhase iakhawunti yakhe kwangaphambili. Oku kuya kukunika uxolo lwengqondo lokuba umrhwebi weakhawunti unenkuthazo yokwenza urhwebo olunomngcipheko ophantsi, ngombono wokwenza wena (kunye nabo) eyona nzuzo ilungileyo. IAlpari inelayisensi yiCySEC, oko kuthetha ukuba iqonga lilawulwa ngokupheleleyo.
Ilawulwa ngokupheleleyo yiCyprus Securities and Exchange Commission
Ukufikelela kubathengisi bePAMM abanamava
Abahwebi bahlala bexhasa iipotifoliyo zabo nge-40% yeemali zabo
Ukuthetha-thethana ngezivumelwano zekhomishini yakho
Ndwendwela iAlpari ngoku
Iiakhawunti ezilawulwayo zePAMM zibonelela ngokurhweba ngokufikelela ngokupheleleyo kwintengiso yehlabathi. Eyona nto ilunge kakhulu, awudingi ukuba ngumrhwebi obalaseleyo ukuze ubandakanyeke.
UBenjamin Franklin wayekhe wathi, "Utyalo-mali kulwazi luhlawula eyona nzala". Nangona kunjalo, abanye abathengisi abanalo nje ixesha lokufunda ii-ins kunye nokuphuma kwe-forex, ukuya kuthi ga kwinqanaba elifunekayo ukuze uphumelele. Ukuba oko kuvakala ngathi, kungakuhle ukuba uqwalasele iiakhawunti ze-PAMM ezilawulwayo Forex yorhwebo imisebenzi.
Kukho abathengisi abanamava kakhulu kwi kwimarike Forex, Kodwa ngubani oswele nje ixesha lokujonga iindaba zezezimali nezoqoqosho, kungasathethwa ke ngeetshathi. Ababoneleli ngeakhawunti yePAMM bavumela uhlobo lokurhweba ngokungakhathali abanye abatyali mali banqwenela.
Ngendlela efanayo, ukuba ungumrhwebi we-newbie, iiakhawunti ze-PAMM ezilawulwayo zikunika amathuba okurhweba kweyona marike yolwelo ehlabathini. Xa kuziwa kulwazi lokurhweba, ukuba inqanaba lakho lincinci kulonto, ayinamsebenzi. Logama unemali yokutyala imali, umrhwebi wePAMM uya kuyenzela yonke into.
Inkqubo-sikhokelo yee-akhawunti ze-PAMM ezinokuba nzima ukuyiqonda kwasekuqaleni. Emva kwayo yonke loo nto, kukho abathathi-nxaxheba abathathu abathathe inxaxheba kwisivumelwano esinye- umrhwebi, inkampani yomrhwebi kunye nomtyali mali. Zonke zidlala indima ebalulekileyo.
Ngale nto ithethwayo, sigubungele yonke into oyifunayo malunga neeakhawunti zePAMM ze-forex. Ngenxa yoko, kuya kufuneka ulungele ukufumana umboneleli weakhawunti ye-PAMM ehambelana neemfuno zakho.
Yintoni iPAMM isifinyezo?
I-PAMM sisichazi 'semodyuli yolawulo lwabiwo lweepesenti'. Umphathi weakhawunti ye-PAMM ukwenzela urhwebo kwaye uthatha ipesenti yomzamo.
Yeyiphi eyona dipozithi incinci yomthengisi weakhawunti yePAMM?
Ubuncinci bedipozithi efunekayo kukukhetha kweqonga lomrhwebi. Ngokubanzi, oku kungaqala kwi- $ 2k ubuncinci.
Ithetha ukuthini ipesenti yokutsala kwiakhawunti yam yePAMM?
Ipesenti yokutsala ikakhulu inyathelo elisetyenziselwa ukubonisa ukusebenza kwembali ye-PAMM yangaphambili. Umzekelo, ukuba i-PAMM inerekhodi eliphezulu lama- $ 150,000 kwaye ngoku ixabisa i-120,000 yeedola, oku kuthetha ukuba ukwehla okuphezulu kuku-20%
Ngaba ndingayenza inzuzo ngeakhawunti yePAMM?
Xa ubhalisela iakhawunti yakho ye-PAMM uya kuba yinxalenye yesivumelwano sokwabelana ngenzuzo. Masithi umzekelo ukuba njengomrhwebi ufumana i-15% yazo zonke izibonelelo ozenzayo usebenzisa i-PAMM. Ukuba ukuphela kwenyanga yokuqala kwenziwa i $ 40,000, uyakufumana i $ 6,000 ikhomishini ngaphambi kokuba izibonelelo zabelwe abanye abatyali mali.
Nguwuphi umahluko phakathi kwePAMM, LAMM kunye neMAM?
Nge-PAMM uyakwazi ukukhetha ukuba igcinwe phi imali yakho yorhwebo. I-LAMM ('imodyuli yolawulo lwabiwo oluninzi') sisichazi sePAMM, njengoko singasebenzi ngokuxhomekeke kubungakanani beakhawunti yomrhwebi ngamnye owahlukileyo. Xa kuziwa kwi-MAM ('ulawulo lweakhawunti ezininzi'), oku kwahlulwa ngokwabiwa kwezorhwebo phakathi kotyalomali kunye neakhawunti eyintloko. Iiakhawunti ze-MAM ziyindlela ethe kratya yokurhweba kunePAMM kunye neLAMM.